Zimbabwe swears in eight anti-corruption commissioners | Globe Afrique - Africa and World News
Home/News/Zimbabwe swears in eight anti-corruption commissioners
Globe Afrique News Desk July 16, 2019
LONDON – In an effort to curb corruption, Zimbabwe’s President Emmerson Mnangagwa has expressed renewed commitment to empowering the country’s commission responsible to monitor and investigate acts of corruption.
On Monday, the President swore in eight new commissioners of the Zimbabwe Anti-Corruption Commission (ZACC) that is constitutionally tasked to fight corruption.
The move to empower the commission follows the appointment and swearing in of ZACC chair Loice Matanda-Moyo at the end of last May.
Mnangagwa constituted the new ZACC after he dissolved the old ZACC in February this year due to alleged incompetence.
Among the eight commissioners sworn in are two former opposition MDC party members, Jessie Majome and Gabriel Chaibva. Many people in Zimbabwe see the latest move as a serious effort to fight corruption in a non-partisan manner.